Izinkampani ze-IT - I-Easy Multi Display - izimpawu ze-Digital
Izinkampani ze-IT zethemba i-Easy Multi Display
"Besifuna i-Digital Signage Software ephumelelayo kumakhasimende ethu!"
INetkom informatique yinkampani yamakhompyutha yaseFrance. Le nkampani isebenze iminyaka engaphezu kwengu-18 futhi isebenza namakhasimende amaningi njengabantu ngabanye, ama-SME, ama-VSE noma amahholo asedolobheni futhi inakekela zonke izinhlobo zokufakwa!
Ngo-2021, iNetkom Informatique izofaka i-Easy Multi Display kwelinye lamakhasimende abo!
Iwebhusayithi yeNetkom Informatique
Ikhasimende lakhe belifuna ukukwazi ukubonisa okuqukethwe nje esikrinini salo esikhulu futhi likwazi ukukushintsha ngokushesha okukhulu njengoba izinsuku zihamba. Ngakho-ke siphakamise i-Easy Multi Display ekwazi ukwenza konke okufunwa yikhasimende!
Ikhasimende leNetkom Informatique manje selingakhombisa lokho elikufunayo lapho lifuna futhi lingashintsha nokuboniswa kwalo ngokuchofoza okulula!
Ukulungiswa okwamukelwe yiNetkom Informatique kube yinguqulo "yesikrini esisodwa" yesoftware ye-Easy Multi Display kanye nekhompyutha encane kanye nesibuko semali elinganiselwa kuma-euro angama-500.
Thuthukisa isipiliyoni samakhasimende akho
Nikeza amakhasimende akho okuhle kakhulu bese ukhetha i-Easy Multi Display njengesoftware yakho yezimpawu zedijithali!